लाटा छैनन् हाम्रा कविता - सरिता तिवारी | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home गृहपृष्ठ बहस / दृष्टिकोण लाटा छैनन् हाम्रा कविता – सरिता तिवारी
लाटा छैनन् हाम्रा कविता – सरिता तिवारी
on: मंसिर ६ , २०७२ आईतवार- ०५:०६
गत अंकको ‘फुर्सद’मा आजका कविताबारे चिन्ता जाहेर गर्दै छापिएको कवि मनु मन्जिलको ‘कवितामा लाटा शब्दहरूको पिरामिड’ शीर्षकको लेख पढेपछि केही लेख्न मन भयो। कवि भन्छन्, कविता धेरै राजनीतिक भए।
कवितामा प्रयोगशीलता ठ्याम्मै भएन। मोहन कोइराला वा बैरागी काइँलाका कविताले जस्तो ‘टेक्टिक’मा टेकेर लेख्ने ‘हैसियत’ र ‘साहस’को कवि एउटै छैन । आजको नेपाली कविता कोइराला र काइँलाको ‘नक्कल’मात्र हो।
सक्कली कविता त मोहन कोइरालासँगै आर्यघाटमा पुगेर खरानी भइसक्यो अथवा काइँलाबासितै एकेडेमीको कुनै खोपामा ‘राज’ गरेर थन्किएको छ। बेलाबखत त्यसलाई प्रदर्शनीका लागि भोटो जात्राझैं एकेडेमीका मझेरी र आँगनहुँदी निकालिन्छ र भनिन्छ, ‘ल हेर मूर्ख कवि हो, यी यस्तो हुन्छ सक्कली कविता !’ कविको कथनीको चुरो यही देखिन्छ।
मनु मन्जिल नेपाली कविता परम्परामा ‘राम्रा’ कविका रूपमा सुपरिचित छन् । भलै उनका अधिकांश कविताले जमिनै नटेकेका किन नहुन् !’शत्रु’, ‘दुश्मन’, ‘बैरी’ उनका प्रिय शब्द हुन्। आफ्नो दुश्मनप्रति उत्पात आदर प्रकट गर्ने कविको विचारबाट प्रभावित नहुने को होला? सो, म पनि प्रभावित छु। सुरुआत पनि यहीँनेरबाट गर्न चाहन्छु।
शत्रुको आमनेसामने नभई रिसाइरहेको कविप्रति रोष छ लेखमा। त्यस्ता रिसाहा कविको कविता लेख्‍नुको ‘आनन्द’ कहाँ गयो होला? चिन्ता प्रकट गरिएको छ। बडो सहजतासाथ ध्यान मुद्रामा आराम कुर्सीमाथि बसेर बकुल्लोझैं सोच्दासोच्दै ‘युरेका ! युरेका!’को भाव आउने गरी ‘दिव्य’ कविता लेख्ने कविहरूलाई त्यो ‘प्लेजर’ को कत्रो तृष्णा हुँदो हो?
तर बदलिँदो समाज, बदलिँदो अर्थव्यवस्था र देशको आमूल पुनर्संरचनाको मेहेरोमा प्रश्नहरूको चाङ छोडेर चिप्लि“दै गरेको इतिहाससित कन्चट ठोक्काउँदै हिँडिरहेको कविलाई आराम कुर्सीमा बसेर काव्यतत्व सोचिरहने फुर्सद कहाँ?
आनन्दका लागि मात्रै लेख्ने भए कवि किन हुनुपर्थ्‍यो? पातको बाजा बजाउ“दै खोलाको छेउछाउ घुमिहिँडे पुगिहाल्थ्यो। जुन दिन प्रश्नको घन्टीले दिमागको परिधि बजेर खपिनसक्नु हुन थाल्यो, त्यही दिनलाई साँध बनाएर ऊ उत्तरको खोजीमा निस्केको हो।
जन्मँदै पराजयको टाँचा लगाएर आएको मानिससित विद्रोह पनि जन्मजातै हुन्छ। कविताको स्वभाव कविको स्वभावले निर्धारित गर्छ। तर, कविको स्वभाव कवि एक्लैले निर्माण गर्दैन। उसले देख्दै भोग्दै आएको राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक पद्धतिले निर्माण गर्छ।
समाज या राज्य प्रणालीबाट उसले प्राप्त गरेको व्यवहारले गर्छ र त्यसबाट निर्मित एउटा सिंगो मनोसामाजिक विम्बले गर्छ। भन्ने सीप नपुग्नु कविको कमजोरी हुन सक्ला । तर, कविका लागि विद्रोह उसको अधिकार हो र आक्रोश उसको पुँजी। उसका लागि कविता केवल ‘आनन्द’को कार्य-व्यापार होइन।
रुसी साहित्यकार प्लेखानोवले कतै भनेका छन्, ‘जिउँदा मानिसहरू जीवित प्रश्नहरूबारे सोच्छन्।’ आजका कविहरू आफू जिउँदै हुनुको सप्रमाण जिउँदा प्रश्नहरू लिएर भकाभक समाजतिर फर्किएका छन्। इतिहासतिर फर्केका छन् र फर्केका छन् वर्षौं पराजित हुँदै हिँडेको रगत र आँसुको बाटोतिर।
प्लेखानोवको आहानलाई उछिनेर कविहरू निषेधित मुर्दाघाटमा पनि पुगेका छन् र अस्थिपञ्जरका अवशेषभित्र समेत सम्भावित उत्तर खोज्दैछन्।
शत्रु सत्तामा छ। परिवार, समाज, राज्य जहीँकहीँ छ । त्यो सदेह र साकार छैन। मानिसका धारणामा छ शत्रु।
समाजको प्रभुत्वशाली लिंग, वर्ग, समुदाय र उसले बलैशान्ति खैंचेर राखेको शक्तिमा छ शत्रु। प्रश्नका कतिपय उत्तर शत्रुका मुठ्ठीभित्रै कैद छन्। सत्ताधारीहरूका खोपीमा, गोदाममा र तिनका यार्डहरूमा फुलेका सुन्दर फूलका जरामुनि पनि छन्।
शत्रु जहिल्यै क्रियात्मक गतिशीलताको विपक्षमा छ । यथास्थितिमा नै टाँसिइरहनु उसको सार्वकालिक चरित्र हो। यससित लड्नु ज्यादै गाह्रो छ । कारण, यो आफ्नो सत्ता जोगाउन माहिर छ। बहुत चलाख र धूर्त छ र मुख्य कुरा यो संस्थापनको अविराम भजन गाउँछ।
संस्थापनप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ। ऊ बदलिनु उसको आजसम्मको सहुलियत र प्राधिकार गुम्नु हो। ऊ बदलिन्न बरु यदाकदा लचिलो भएजस्तो गर्छ । यो कुरा छर्लंग देख्ने कवि शत्रुतर्फ आमनेसामने भएरै कवितामा संवाद गरिरहेको छ।
कवितामा दृश्यात्मकता छैन। अर्को आरोप। नबुझिए पनि ‘देख्न’ सकिने भिजिबिलिटी’ भन्या के हो? पस्ट भएन। देवकोटा, रिमाल, भूपि वा मीनबहादुर विष्टका कविताको ‘ताकत’का अघिल्तिर अहिलेका कवि निम्छरा भएको निष्कर्ष निकाल्नु विमल निभा, श्यामल, विक्रम सुब्बा या श्रवण मुकारुङ आदिका कविताचैँ झारपात नै हुन् भन्ने त होइन होला। तर, आशय यस्तै हो कि झैं देखिन्छ।
प्रतिरोधी चेतना बोकेको कविता लेखन राम्ररी संस्थागत नभए पनि पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा यही चेतनाका कविता बढी लेखिएका छन् । लेखले यिनलाई ‘राजनीति’ जस्ता कविता भनेर भित्ता लगाइदिएको छ।
भित्ता लगाउँदैमा साँचो कुरा फेरिँदैन। ‘गहुँगोरो अफ्रिका’ लाई भने ‘कविताजस्तो राजनीति !’का तर्कमा ‘राम्रो होला’सम्म भन्नु यसप्रकारको कवितासित कसै जुध्नैपरे मैले यसो पनि त भन्या छुन्त ! भन्ने बाटोमात्र हो।
कविले यस लेखमा कवितालाई खेलसित दाँजेका छन्। केही पहिले एक कथाकारले कथालाई सहवास क्रियासित दाँजेको सम्झिएँ । कविताका कुशल खेलाडीहरू यसलाई उत्तेजनामूलक भाषिक खेल बनाउँदा हुन्।
मैले यसलाई खेलको रूपमा बुझेको छैन। कविता सामान्य कथ्यभन्दा विशेष हो। यसलाई प्रारम्भ, विस्तार र अन्त्यको आकर्षक र पठनीय रूपाकृति दिनुपर्छ। मैले जानेको यही हो।
सकेसम्म छरितो संरचनामा कविताले केही फरक तरिकाले, केही नयाँ तरिकाले कुनै विशिष्ट कुरा भन्नुपर्छ। विषय नयाँ होस् या पुरानो, निजी होस् या सामूहिक, त्यसको प्रस्तुतीकरणमा सकेसम्म मौलिकता हुनुपर्छ। मेरो मोटो बुद्धिले यही भन्छ।
‘बन्‍नुपर्छ मौकामा शत्रुको पनि सेवक’जस्ता अवसरवादी प्रेरणा दिने कविता धेरै लेखिए नेपाली कवितामा। या ‘लाग्दछ मलाई रमाइलो’ जस्ता गीत पनि धेरै गाइए। आजको कवि निर्मम यथार्थ लेख्दैछ। यो सिलसिलाको प्रारम्भ खोज्न गोकुल जोशी वा युद्धप्रसाद मिश्र हुँदै अझ पल्तिरसम्म पुग्नुपर्ला।
यसलाई फैलाउने काम भूपि शेरचनले गरे। त्यसको निरन्तरता दिने पुस्ता जीवित र सक्रिय छ“दैछ । यथार्थ लेख्‍नुमा जोखिम छ तर कविता केही भन्न खोजेझैं मुख बाएर कुरा चपाउँदै थुकसितै भित्र निल्ने कुरा होइन। कवितालाई इन्द्रजालिक मिथ्यामासजस्तो बनाएर विशिष्ट पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
कविले यस लेखमा काव्यिक खेल खेल्न नजान्ने कविको हुर्मत लिएका छन्। तर खेलकै कुरा गर्ने हो भने खेलाडीका लागि न्यूनतम पनि जर्सी या जुत्ताको सुविधा पनि त हुनुपर्‍यो ! भान्सामा भात उसिन्दाउसिन्दै, कारखानाको पाले भएर उभिँदाउभिँदै, आरनमा खलाँती ठेल्दाठेल्दै कविता भन्न उभिएको कवि नांगै खुट्टा उपस्थित छ मैदानमा। बिनाजर्सी। बिना कुनै तालिम।
उसले खेलका तिक्डम जानेको छैन। ठेलेर वा पछारेर अघि जान सिकेको छैन। मात्र भन्नका लागि प्रशस्त ‘कुरा’ छन्। जुन दिन ऊ खेलका नियममा पारंगत हुनेछ र खेल्न थाल्नेछ, ‘नामुद’ ठानिएका खेलाडीहरूमा भागाभाग सुरु हुनेछ।
आजको कवितामा लँगौटीको डोरीसँगै अगुल्टो बाँधेर मलेरियासँग लड्दै तराई आवाद गर्ने मानिसका वंशज छन्। ढाक्रे, पिपा र दरबारका नानी भएर चरम अपमानको जुनी पार गरेका निर्धा मानिसहरूका खलक पनि छन्। ‘घर’को सांस्कृतिक ढाँचा र परिधि तोड्न छिनो र हम्मर लिएर कस्सिएका महिलाहरू छन्।
निम्न कोटिको श्रमले उठेको हातका फोरा र पाइतालाको रगतको हिसाब असुल गर्न साधिकार उभिएका दलितहरू छन्। यिनीहरू आजसम्मका हिंसा, आँसु, विश्वासघात र जुँगौँको मौनताको पुर्ताल हुने गरी कविताको रंगमञ्चमा प्रकट भएका छन्।
विनिर्माण र निर्माणको यो लोभलाग्दो शृंखलामा यिनीहरूसँगै सहकारी हुन आइपुगेका न्यायप्रेमी कविहरू पनि छन्। भलै यी कविहरूसित भव्य र आलंकारिक व्यक्तित्व छैन तर यिनका कवितामा गज्जबको आत्मबल छ। ती शब्दलाई ताछ्न, खुर्कन या कुनै चित्रात्मकता प्रदान गर्न कति सक्लान् तर तिनमा कुनै पनि कृत्रिमता छैन। ती मुखर र प्रस्ट छन्। आफ्ना कविताको शक्ति र सीमा जान्दछन्।
कमसेकम कलाको हावा फुक्दाफुक्दै बडेमानको आकारमा फुलेर बसेको निर्जीव बेलुन त होइनन् तिनका कविता जुन हावामा उडिरहेको देख्दा ‘आनन्द’ त लाग्छ तर कुनै पनि बेला प्याट्ट फुट्छ र सिद्धिन्छ।
आजको कविता आफ्नै गोडाको भरमा उभिएर दौडने प्रयत्न गरिरहेको लंगडो तर अमर्खले भरिएको वर्ग, समुुदाय र लिंगको कविता हो । कवि मनुु मन्जिलले भनेजस्तो कविता भाषाविहीन, लाटो या लबस्तरो छैन।
समाज विकासका क्रममा निरन्तर परिवर्तन हुँदै जाँदा नयाँ इतिहासको जन्म हुन्छ। समाजविज्ञानीहरू यस्तो परिवर्तनलाई कालगत खण्डहरूमा विभक्त गरेर संश्लेषण गर्छन्। नेपाली समाज यतिखेर इतिहासमै सबभन्दा खुला, सापेक्षतः सबभन्दा स्वतन्त्र र व्यापक सांस्कृतिक बहसको ऐतिहासिक समयमा छ । राजनीतिक अर्थमा यसलाई इतिहास रचनाको दुर्लभ ‘अवसर’ भनिएको छ।
यो ‘अवसर’ कतिपय अधिग्रहित भाषा, संस्कृति र सभ्यताको, जाति र समुदायको पुनर्जागरणको मात्र नभएर राष्ट्र र राज्यको अवधारणात्मक पुनर्व्याख्याको पनि हो। समाजमा निरन्तर प्रभुत्वको राजनीति खेलिरहेको वर्गले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, सांस्कृतिक अवधारणा र पद्धतिहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने र सबैका लागि सहज, सुलभ र वास्तविक लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापनाको समेत अवसर हो।
आजको कविता इतिहासका पराजितहरूको कविता हो। धुलो टक्टक्याउँदै उठेको अधमरो चेतनाको कविता हो। आफ्नै गोडाको भरमा उभिएर दौडने प्रयत्न गरिरहेको लंगडो तर अमर्खले भरिएको वर्ग, समुदाय र लिंगको कविता हो। तर तपाईंले भनेजस्तो यो भाषाविहीन, लाटो या लबस्तरो छैन।
यसको भाषा कविताका पण्डितहरूले कम र समाजशास्त्री वा मानवविज्ञानीहरूले ज्यादा बुझ्ने देख्छु म। कर्णालीको तुइनमा तुर्लुंग झुन्डिँदै स्कुल जान हिँडेका नानीहरू, आफू किन राष्ट्रिय पक्षी होइन भनी प्रश्न सोध्ने चिबे चरो, सार्कीको पिँढीमा आएर उसैका सन्तानको छाला भुत्ल्याउने किताब या आफ्नो अनुहारमाथि कसैको शासन सहन नसक्ने प्रतिरोधी महिलाको जागृतिबोधमा कुनै ‘भाषा’ नभेट्ने तपाईंको विवेक देखेर आश्चर्य होइन टिठ लागेको छ। र लागेको छ, के अब कविताको भाषा सोसियोलिंग्वस्टिक प्रयोगशालामा मात्रै देखिने भएको हो?
नेपाली कविताको समयलाई चिरा पारेर २०३६ पछि र अझ विशेषतः २०६३ यता झन्डै एक दशकका कविताको कुनै दुराग्रह नराखी मूल्यांकन गर्ने हो भने इतिहासका सबभन्दा वाचाल कविता यतिखेरै लेखिएका छन्।
हो, रिमालले ‘आमा’ को विम्बमार्फत सामाजिक न्यायको सम्मोहनकारी सहादतको प्रेरणा दिएका हुन्। तर आजको कवि उधारो सपनाको होइन, स्वयं बलिदानको दृष्टान्त बनेको छ। यी दृष्टान्त कसैले पर्दा लगाएर छेक्न खोज्दैमा छेकिँदैनन्। न ‘कला’ का गफले मात्रै विषयान्तर गर्न सकिन्छन्।
कविताका ठाउँमा बरु विज्ञापन छापिए हुन्थ्यो भने भावनामा नयाँ कविहरूको आगमनमाथि निषेधको गन्ध भेटिन्छ। अखबारका शनिबारीय अंकहरूले दिएको स्पेसमा छापिएर आफ्ना कवितामाथि परीक्षण र प्रतिक्रियाको अवसर प्राप्त गर्ने निहत्थो कविका टाउकामा अपमानको घन बजार्दा कविज्यूलाई आफ्नै लेखनका आभ्यासिक दिनहरूको सम्झना भएन?
अपरिस्कृत रचनाहरूको लामो शृंखला नहिँडी बनिबनाउ ‘राम्रो’ कवि बन्नसक्ने विलक्षणता कति कविसँग होला? अखबारीय स्पेस ‘राम्रा’ कहलिएका कविहरूका मात्रै जागिर होइनन्। सिकारु कविहरूका धुलौटा र कालो पाटी पनि हुन्।
‘राम्रा’ कविहरूले त राष्ट्रिय कविको पगरीमात्रै होइन, सार्कस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय कविको समेत बर्को ओढिसकेका छन् । ‘अन्य’ कविले आफूलाई पाठकसमक्ष प्रस्तुत गर्ने यस्तै स्पेस हुन्।
देवकोटा, रिमाल या भूपिका सिर्जना नेपाली कविताको आधुनिक चेतनाका आह्वानमात्रै थिएनन्, कला र विचार दुवैले भव्य थिए। हामी तिनका ऋणी छौं। तर आजका नेपाली कविता कत्ति पनि परिस्कृत भएनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुचाहिँ परम्परालाई खोपामा राखेर पुज्ने प्रवृत्ति हो।
आजका कवितासित सामयिक रूप र चरित्र छ। यिनको आफ्नै समाजशास्त्रीय र कथ्यगत भिन्नता पनि छ। यो फैलँदै र विस्तृत हुँदैछ। कविहरूको संख्या बढ्नु ड्रग एडिक्टको सङ्ख्या बढेजस्तो होइन। खुसीकै कुरा हो।
अझ खुसीको कुरा, अहिले प्रतिरोधी शक्तिसहितका कविता आत्मसम्मानका साथ उभिएका छन्। ती अब कसैले बुझ पचाएर ठेल्न खोज्दैमा ठेलिँदै छेउ लाग्ने अवस्थामा छैनन्।
कविताको मध्यपथमा स्वाभिमानपूर्वक हि“डेका यस्ता कविता देखेर केहीलाई रिँगटा लागिरहेको छ। आशा गरौं, कवि मनु मन्जिललाई चैं यस्तो रिँगटा लागेको नहोस्।
श्रोत – अन्नपुर्ण पोस्ट २०७२ भाद्र १४ सोमबार
“अङ्ग्रेजी भक्तिमार्ग” – सङ्गीत श्रोता